Maitiro Ekuisa Iyo Pini Kune Sms Pa Twitter? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 545
Iyo Twitter Mushandisi ine sarudzo ye seta iyo PIN yeSMS; Nechinangwa ichi, iwe unofanirwa kutevedzera maitiro aya: Kutanga, unofanirwa kuona kuti nharembozha yako yakabatana neakaunti yako yeTwitter.
Tevere, Mushandisi anopinda muAkaunti yake yeTwitter pawebhu uye iri pa Kugadziridza nhare; Isa iyo PIN yaunoda, iyo inofanirwa kunge iine mavara mana alphanumeric, uye enda kuzasi kweiyo peji, tinya Sevha shanduko.
Kana iyo Mushandisi PIN, meseji yekusimbisa ichaonekwa. Kana Mushandisi akagadza PIN yeAccount yake, anofanirwa kuiisa pamberi pemavara eTweet kana iyo SMS rairo yaanotumira kune yake pfupi kodhi yeTwitter.
Chinja kana Kudzima PIN pa Twitter
Iyo PIN inhamba yekuzvizivisa iyo Mushandisi yaanogona kushandisa chengetedza kuchengetedzeka kubva kuAunti yako ye Twitter. Uine iyo PIN iwe unogona kuwedzera chinongedzo kune ako ekuvandudza uye miraira mbozhanhare.
Mushandisi, kamwe yakamisa PIN yako Yako Twitter Account, iwe une sarudzo dzekugadzirisa kana Kudzima iyo PIN. Mupfungwa iyi, zvinoda kuenda kuConfiguration yemidziyo mbozha; kamwe ipapo, munda wePIN uripo.
Mundima yePIN, Mushandisi anowana Chinja kana Kudzima PIN yako kamwechete. Nechinangwa ichi, iwe unofanirwa kupuruzira kusvika pasi peji uye woenderera kusarudzo Sevha shanduko, tinya.
Gadzira LIVE MAVHIDHIYO PAITITTER
Pane iyo Twitter chikuva, Mushandisi ane mukana we gadzira Mhenyu Vhidhiyo uye govana zviri kuitika munguva chaiyo. Twitter ndiyo nzvimbo yakakwana yekuwana ruzivo pane chero chinyorwa chepasirese.
Kuti iyo Twitter Mushandisi igadzire Live Vhidhiyo, iwe unofanirwa kuita zvinotevera: Dzvanya paTweet Bhokisi; tinya Rarama musarudzo yepazasi; nhepfenyuro mhenyu, une sarudzo yekudzima kamera uye unotora chikamu chete neodhiyo, apa tinya maikorofoni.
Tevere, Mushandisi anodzvanya paTransmit Live; unokwanisa pedza Live Video yako Panguva ipi neipi, tinya pa Mira kumusoro kuruboshwe uye simbisa yako sarudzo mumenyu inoratidzwa.
Bvumira Vatariri Kukumbira Kujoinha yangu Twitter Stream
Iyo Twitter Mushandisi ine sarudzo yekutendera Vataridzi kuti Vakumbire Joinha yako StreamIwe unongoda kutevedzera maitiro aya: Dzvanya pabhokisi kune Tweet; Dzvanya Rarama pazasi pebhokisi.
Dzvanya paikoni mukona yekumusoro kurudyi kuti iite kuti zvive nyore kune vashandisi Rarama vatariri, Kumbira Kujoinha Mushandisi Kufambisa; Dzvanya pa Broadcast live kuti utange nhepfenyuro yako pasocial network Twitter.
Kana mushandisi we Twitter Kumbira Kujoinha pamusoro peMushandisi Transmission, chiziviso chichaonekwa mune chat; tinya pane icon kuti uiwedzere. Kana iwe ukafunga kubvisa muenzi, tinya X kumusoro kurudyi kweavatar yavo.
1 Chinja kana Kudzima PIN pa Twitter
2 Gadzira LIVE MAVHIDHIYO PAITITTER
3 Bvumira Vatariri Kukumbira Kujoinha yangu Twitter Stream